Nigh Gale | 10:06 PM | စလုံးအကြီးအသေးပြောင်းရန်
စက်ရဲ့ Copy နှုန်းကို အစွမ်းကုန် မြှင်တင်ပေးမယ့် Tera Copy Pro v2.27+Serials
Computer အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Window Doctor v2.7.3.0
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမူ (၅) ချက်
Download Software Kingsoft Antivirus Kingsoft Antivirus MSOffice2007 Flash-Player MSN-Messenger Picasa3 Photoshop u996 Zawgyi Font Mozilla Firefox Internet Explorer Opera KAV6.0.3.837_WINSERVEN Gom Player Gtalk QQ-Messenger VZO Google_Earth ooVoo Skype Yahoo FreeCall Window Media Player K-Lite Mega Codec Pack Foxit PDF Reader Kaspersky AVP Miro Nero9Free Edition AIMP Winrar FlashGet Winamp Photoscape
သြော်....လူ့ပြည်လောက လူ့ဘ၀ကား အိုရနာရသေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည်း။ သို့တပြီးကား..... သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည်၊ အခြေတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။ သင်၏မျိုးသား၊ စာစကားလည်း၊ ကြီးပွားတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏။ သင်ဦးချ၍အမျှဝေရာ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင် ဥာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်းလျက်ဝင်းလျက် ကျန်စေသတည်း။ (ဇော်ဂျီ)
<center><a href="www.ashintejinda.blogspot.com/" style="background-color: white;" target="_blank"><img style="width: 233px; height: 165px;" src="http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7uYKqkoqtPsbnM&tbnid=JeZHr8Op3Tp92M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fphozaw.wordpress.com%2F%25E1%2580%2597%25E1%2580%25AF%25E1%2580%2592%25E1%2581%25B6%2F&ei=m21JUanBIqmpiAez34GACQ&bvm=bv.44011176,d.aGcψg=AFQjCNEHGh8zlpwzfFo6PVr-g6J8xa1rpA&ust=1363853039090618" /></a></center>
သေနတ် နဲ့တန်အောင် နေရင် သေနတ် တွေပဲ ရောက်လာလိမ့်မယ်
ဘယ်သူ့ အနာဂတ်ဟာ လှပနိုင်မလဲ။
တရားနည်းလမ်းကျစွာ တုန့်ပြန်မှသာ ...၊
ဥပဒေကို ယုံကြည်ကိုင်စွဲမှသာ ...၊
ကိုင်တွယ် ဆုံးဖြတ်ပါမှသာ ...၊
ဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလ ဟောကြားတော်မူအပ်သော စီဒီ(၂)
ချမ်းမြေ့မြိုင် ဆရာတော် အရှင်တေဇာသာရ ဟောကြားတော်မူ...
ပညာသယံဇာတ - အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ (ဓမ္မပိယဆရာတော်)
အဖြူရောင်အဇ္ဈတ္တ အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ (ဓမ္မပိယဆရာတော်)
စက်ရဲ့ Copy နှုန်းကို အစွမ်းကုန် မြှင်တင်ပေးမယ့် T...
Computer အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Window Doctor v2....
Gmail အကောင့်အတွက် ဖုန်းမလိုတဲ့ နည်းလမ်းသစ်ဖွင့်နည...
Video တွေကို.. 3D ပြောင်းမယ့် Aiseesoft 3d Convert...
Mp-3 တရား (၅၂-ပုဒ်)
ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတာဘိဝံသ၏တရားတော်များ
အောင်ဆန်း ဆရာတော် ဦးဘဒ္ဒန္တ သဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ
ဆရာတော် အရှင်ရေဝတ (ဖားအောက်တောရ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ)
ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဓမ္မပိယ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ သင်ကြားပို့ချသေ...
ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူ...
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင် ...
ဆရာတော် အသျှင်ဇာဂရ မထေရ်၏ကျမ်းစာများ
အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဆန်း ယမိုက် ပဠာန်းဗီဒ...
ဘဒ္ဒ န္တ သုစိတ္တာဘိဝံသ (ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်) ရေးသား ပြုစ...
စာအုပ်ပောာင်း စာအုပ်ကောင်း 500
အခြား ကျမ်းစာများ အခြေပြု
ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ အခွေ(၁) တရ...
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန ဟောကြားခဲ့သော တရားေ...
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားခ...
တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရဘိဝံ...
ဆရာတော်ဦးဃောသိတ (မိုးကုတ်)၏ တရားတော်များ
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝိရိယ (တောင်စွန်း). ၏ အတွေးအမြင် တရား...
ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ တရားစာအုပ...
သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ တရားစာအုပ် နှင့် MP3 အေ...
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏တရားတော်များ စာအုပ် နှင့် ...
စွန်းလွန်းဆရာတော် MP3 များ
ဝေဘူ ဆရာတော် ကြီး ၏ တရားစာများ
တော်ကူး ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ တရားတော်များ
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ အာစိဏ္ဏ ၏ တရားစာအုပ်...
မောင်းထောင်မြေဇင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကန္နီနည်း သမထ၊ဝ...
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ တရားစာအုပ်များနှင...
ပခုက္ကူ အနိစ္စ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဟောကြားသော တရားစာအ...
သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလာဘိဝံသ ဟောကြားသော...
မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ တရားစာအုပ် နှင့် MP3 မျ...
မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ၏တရားတော်များ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလောင်းလျာတုန်းက၊နောက်ဆုံးအထိပါရမီလူနတ်များစွာ၊ချမ်းသာရေးမို့ ၊အသက်ပေး၍၊ ဖြည့်ခဲ့သည်၊ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာအတွက်တော့၊ငါပါအသက်ဆုံးစေမည်၊နောက်မဆုတ်ပေါင်၊ခုလိုတွေးလို့ ၊ကုသိုလ်ရေးမို့ ၊ ကြိုးစားမည်၊ဒို့ လဲကြိုးစားမည်။ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်)
widget @ surfing-waves.com သတင်တွေဖတ်ချင်ရင်
ကာလာCode ယူရန် : Recommend us on Google! RSS Feed linkedin Google Plus Blogger Widget » Recent Comments Widget